အယူတော် မင်္ဂလာ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အယူတော် မင်္ဂလာ	# ဒေါသထွက်နေသော ဌက်များ / Angry BirdsPublished May 23, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ် နဲ့ ယခုရောက်နေတဲ့ ၂၀၁၂ ခုများမှာ အင်တာနက်ဂိမ်းများအတွင်း အလွန်ရေပန်းစားလှတဲ့ Game တစ်ခုကို ကျွန်တော် သတိမထားဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီ ဂိမ်းကတော့ လူငယ်အများအပြား သိကြပြီးတဲ့ Angry Birds ဆိုတဲ့ Game ပါဘဲ။
Angry Birds အကြောင်းကို နဲနဲ စပ်စုချင်တာနဲ့ ဗဟုသုတ စွယ်စုံ ၀က်ဆိုဒ်ကြီးဖြစ်တဲ့ Wikipedia ထဲကို ၀င်ကြည့်မိဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ဂိမ်းကို ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာ Apple ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအဖြစ်အနေနဲ့ စတင်ထုတ်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပြီး I pod , I pad ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် လူသိများခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ပထမ (၆)လပိုင်းလောက် အထိတော့ သိပ်ကြီး နာမည်အကြီးစားကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ဒုတိယ (၆)လပိုင်းလောက်ကစပြီး ဒီ ဂိမ်းဟာ တော်တော်လေးကို “ပေါက်” လာပါတယ်။ နောက်ပိုင်း Apple Os အတွက်သာ မဟုတ်ဘဲ ယခု ပိုမိုခေတ်စားလာပြီဖြစ်တဲ့ Android ဗားရှင်းကိုပါ ပြောင်းပေးလိုက်တော့ ဒီ ဂိမ်းရဲ့ အင်ပါယာဟာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ် Smart Phone , ဘယ် Tablet ကိုဘဲ ၀ယ်ဝယ် ဒီ Angry Birds ဂိမ်းဟာ မပါမဖြစ် ပါနေတဲ့ နာမည်ကြီး ဂိမ်းတစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ယနေ့ အချိန်မှာတော့ Angry Birds ဂိမ်းဟာ ကလေး လူကြီးပါ မကျန် နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ခုံခုံမင်မင် ကစားနေကြတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီး “ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သင်္ကေတတစ်ခု” ပါ ဖြစ်လာနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကလေးကျောပိုးအိတ်၊ ကွန်ပါဘူး ၊ စတစ်ကာ ၊ အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီ ၊ အ၀တ်အစားတွေမှာပါ Angry Birds ရဲ့ သင်္ကေတဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြီး နေရာယူလာကို တွေ့နေရပါတယ်။
Posted in အယူတော်မင်္ဂလာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged အယူတော် မင်္ဂလာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,745)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,971)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,810)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,373)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,430)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,576)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,595)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,960)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,298)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,273)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,105)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,051)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,841)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,804)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,303)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,135)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,835)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,494)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,185)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,179)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,828)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,683)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,625)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,551)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,263)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,245)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,908)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,693)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,478)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,026)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !